Dakota Johnson akadzorera mvere dzemavara
Kuva nyenyeredzi chaiye pashure pe "50 shades ye gray", Dakota Johnson anoenderera mberi kuedza nekuonekwa. Munguva pfupi yapfuura, akagura bvudzi rake refu, achiita nzvimbo yakareba, iye zvino akazora zvidhori zveshokotiro rake mu-blond.
Nyeredzi yakanakisa mumupfeko usina kuchena
Paparazzi akaona musikana ane matarenda aMelanie Griffith achibva ku-airport of the City of Angels. Mutambi wemakore makumi mana nemasere akatarisa zvakanaka. Akanga akapfekedza zvipfeko zvakanaka zvekufamba-jira rakasvibirira remvere raibva kuGucci, jira rebhuruu, jeans, mavara ehombodo biker bhoti. Kubwinya kwakanyatsosimbisa kuchena kwechiso chake chinonakidza, uye pamberi pemaziso ake kwakanga kune magirazi akazara, saJohn Lennon.
14 mavara emagetsi evanhu vanozivikanwa, vakashandura zvachose nguva yavo
Dakota Johnson vakataurira pamusoro pekukandwa kwakaoma mufirimu "Suspiria"
Dakota Johnson pamusoro pekuguma kwe sensational trilogy, basa raro idzva uye "zvisina kufanira" mifananidzo yekutarira kweItaly gloss
Zvisinei, kwete chete chimiro chakawirirana cheDakota chakaita kuti vateereri vatarise, vakaona kuti vhudzi ravo ravaifarira raive rakajeka. Haana kutendeukira kune platinum blonde, asi akadzoka kwaari mvere dzisina ruvara rweguru - wheaten.
Makore mashomanana adarika, muchengeti weHollywood akaveura vhudzi rake rakachena, asi inzwi rakaramba risina kubudirira, naizvozvo paakamukumbira kuti azvipirane mumutsara unoita bvudzi rekudhiridzira mumutsara wekurota, akabvuma asina kuzvidemba.
Mariah Carey naJames Packer vakataura nezvechichato chiri kuuya pachitsuwa cheBarbuda
Biological mother of Angelina's daughter Jolie anoda kuona Zahar
Best actress inofanirwa ne "Oscar" jury muna 2016
Lisa Rinn ane makore 53 akazara zvachose nokuda kwe selfies
Sistin Stallone akatanga kutora chikamu muLondon Fashion Week
Nokukurumidza muchato! Ed Sheeran akazivisa kusangana kwake
Ellie Golding akadzima makonkoni nekuda kwekuneta
Bhuku raVictoria's Secret rakaputsa chibvumirano naGigi Hadid nekuda kwekupomerwa kwechisarura
Upenyu hwehupenyu hweOnella Muti
Ace Batterfield naElla Pernell
Alex Rodriguez akatenga ndege itsva yeJennifer Lopez nevana
Jennifer Lawrence haagoni kuvanza nyaya yake naDarren Aronofsky
Ariana Grande achiri mwana
Scammers inogona kukanganisa peji ya Kate Moss mu Instagram
Mitsva itsva yezvipfeko 2015
Maitiro ekukurukurirana uye tsika yekukurukurirana
Nhamba dzenyika dzakawanda
Mafuta ekurapa maronda uye kuputika
Chii chakanoshambidza laminate - mazano akanaka ekuchenesa kwakakwana uye kuchenjera
Nzira yekuita sei muimba yega?
Rhubarb - kubika mapeji, zvipo uye zvinokuvadza
Ndinogona here kupisa zuva mumubhedha wokuchenesa pasina micheka?
Alkaline phosphatase - chii chichaongororwa?
Cottage cheese muvakadzi
Mazuva anofadza okucheka bvudzi